Yaxye Caamir;”Shidaalka Somalida iyo Xaraashka Maanta khatar.” – – AfmoNews
Yaxye Caamir;”Shidaalka Somalida iyo Xaraashka Maanta khatar.” –
Aqoonyahanka Soomaaliyeed ee dhinaca Dhaqaalaha ku taqasusay Proff Yaxye Caamir Xaaji Ibraahim ayaa qoraal dheer ka qoray Heshiiska Shidaalka ee la qorsheeyay inay dowlada Soomaaliya la saxiixato 2 shirkadood.
Proff Yaxye Caamir ayaa qoraalkiisa ku sheegay inuu ogyahay in khatar uu ku yahay naftiisa balse uu u bareeray.
Yaxye Caamir ayaa qoraalka oo uu soo dhigey bartiisa Facebook waxa uu ku bilaabay;
Maanta Anniga oo xanuunsan ayaa Guriga ka baxay, waxaan mar kale la kulmay wadadii aan Magaalada ku aadi jiray oo xiran, Sabab. waxaa la sugayay in ey yimaadaan Magaalada Saddax Madaxweyne Maamul Gobaleed. Waxaa kale oo la sugayay Laba Dayaaradood oo siday Madaxda Shirkado lala saxiixan lahaa Heshiis Shidaal waana yimaadeen. Waxaa la diyaariyay Qolkii wax lagu saxiixi lahaa (F.S: 1 & 2aad).
Waxa kale oo jiro oo Xaraashka door muhim ah ku leh Sinatoor Somaliya oo ka soo Jeedo Gobalka Galmudug iyo Mas’uuliyiin kale oo isla Gobalka ah. Heshiiskaan Madaxweynaha Koofur Galbeed ayaan ku faraxsaneyn Bacdamaa Maamulka hadda iyo kan Mustaqbalka Shidaalkaan oo dhan Howl wadeenada ugu badan ee shirkaduhu kula heshiiyeen in ey sii wadi doonaan dhamaan howlaha Shidaalka ey badankooda qaadatay Galmudug, taa oo Banaanka dhigtay doorkii Mustaqbalkka ee Koofur galbeed iyo Gobalada Qaar .
Shrkadda Liberty Masuuliyeenteeda waxaa ka mid ah Labada Nin ee Walaalaha ah: Mr. Lane Franks ( F.S: 3aad) iyo Mr. Trand Franks.( F.S: 4aad). Mr. John McCain ( F.S:5aad) .Dhinaca Maamulka waxa madax ka ah, Neale Call ( F.S: 6aad) waxaa caawisa Trudy Conner( F.S:7aad)
Khubarada kale ee ku howl leh wax aka mid ah: Dr. Alessio Checconi iyo Mr. Scot Fraserar . dhinaca Amnigana Mr. Phil McDonald oo talo ku bixiyay in Ceelasha Berriga aan heshiis lagu galin oo weli ey Jirto khatarta Al-Shabaab ey geysan karaan, laakin in dhinaca Badda marka hore lagu bilaabo bacdamaa ey yaraatay khatartii Burcad Badeeda oo Sannadkii 2011 aheyd 160 dhacdo, laakin Sannadkaan aheyd Hal dhacdo oo kaliya in kasta oo weli ey jiri karto khatarta Burcad badeedu waa sida uu ku talo bixiyay Mr. Phil.
Anniga oo og Khatarta uu yeelan karo Qoraalkaan in aan qoro ,Haddana ma jirto, Hay’ad ama cid kale oo iga Codsatay ama aan ku xumeeynayo Qoraalkaan, kumana taageerayo Mucaaradka aan ogahay in qaarkood ey sidaan sameey lahaayeen haddii ey fursadaan khaladkaa heli lahaayeen. Waa Cilmi Baaris madax banaan. Intaa ayaana kuugu soo koobay Qoraalka Maanta 4/1/2021,aan Diyaariyay oo aad dheeraa.